Qorshaha E-Learning Deephaven | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Qorshaha elektaroonigga ah ee Dugsiga Hoose ee Deephaven
Tilmaamaha ardayda fasalada 4-5 waxaa lagu bixin doonaa ugu horreyn iyadoo la adeegsanayo ipad-yada iyo barnaamijka cilmiga degmada. Ardayda dhigata Fasalada K-3 Seesaw iyo aalado kale oo wata kombuyuutarro guriga lagu haysto. Tani macnaheedu maaha inay ardaydu ku sii jiri doonaan tiknoolajiyad dhan waqtiga oo dhan, laakiin waa inay lahaadaan isku dheelitirnaan waqtiga oo ku saabsan Schoology oo ay ka shaqeeyaan shaqooyinka loo dhiibo tiknoolajiyad la'aan.
Degmadu waxay leedahay khibrad ballaadhan oo ay ku bixiso barashada khadka tooska ah iyada oo loo marayo barnaamijka Tonka Online, Barnaamijka Dugsiyada Sare ee Minnetonka.
Ardaydu waa inay ka shaqeeyaan shaqada fasalka maalin kasta iyagoo raacaya fasalka maalinlaha ah iyo jadwalka 6-maalin ah.
Waxaa jiri doona e-mayl maalinle ah iyo / ama fariin fiidiyoow ah oo maamulehaaga ah.
Schoology, Seesaw, Google Meet, ama Arimaha Kale ee Tech
Tilmaamaha ku saabsan adeegsiga codsi gaar ah ama degel internet aan looga jawaabin xiriiriyeyaasha kor ku xusan, ardayga ama waalidku waa inay la xiriiraan khadkooda caawinta dhismahooda iyagoo u maraya cinwaanada soo socda:
Deephaven : dhe.helpdesk@minnetonkaschools.org
Dhererka muuqaalka ah : she.helpdesk@minnetonkaschools.org
Su'aalaha Badanaa La Weydiiyo Qoysaska Deephaven
Dugsiga Hoose ee Deephaven wuxuu halkan u joogaa inuu ku caawiyo haddii aad dhibaato kala kulanto barashada elektaroonigga ah. Fadlan dib u eeg su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee hoose, kuwaas oo ka jawaabaya inta badan su'aalahaaga.
"E-Learning" waa maalmaha iskuulka ee macallimiintu ku bixiyaan khibradaha waxbarasho ee elektarooniga ah iyagoo adeegsanaya Schoology, Seesaw iyo Nidaamyada Maareynta Barashada Google.
Goorma ayey macallimiintu kula xiriiri doonaan ardayda waxyaabaha laga filayo elektaroonigga
Macallimiintu waxay u isticmaali doonaan maalinta ugu horreysa e-Barashada sidii waqti ay ugu dejiyaan waxyaabaha laga filayo ardayda iyadoo loo marayo Schoology, Seesaw oo leh xiriiriyeyaal lagu bixiyay Google Doc. Tilmaamaha ayaa la bixin doonaa oo ku saabsan waxyaabaha laga filayo deegaankan waxbarasho, ee ku saabsan laakiin aan ku xaddidnayn:
Sidee waalidiinta loogu wargalin doonaa waxyaalaha laga filayo e-Barashada?
Go'aanka waxaa lagula socodsiin doonaa taleefan otomaatig ah, emayl, baraha bulshada waxaana lagu dhajin doonaa degelka degmada.
Haa. Macalimiintu waxay galayaan xaadiritaanka ardayda Skyward ugu dambeyn 3:00 galabnimo maalin kasta. Ardaydu waxay u baahan doonaan inay uga jawaabaan macalinka si dhakhso leh xaadiritaanka maalin kasta kahor 3.
Haa, laakiin waxaa lagugu calaamadin doonaa maqnaanshaha maalintaas dugsiga. Haddii ilmahaagu jiran yahay oo aanu dhammaysan karin shaqada koorsada, waalidku wuxuu ku soo gudbin doonaa codsi maqnaansho iyadoo loo marayo Skyward.
Haa, fasalada 4-5. Inta lagu jiro waqtigan, waa inuu jiraa isdhexgalka macallinka / fasalka iyada oo loo marayo Schoology, Google Meet, iyo / ama guddiyada wada hadalka.
Ardayda iyo qoysaska waxay si firfircoon ula sameyn doonaan qorshooyin kale macalimiinta ku saleysan baahida.
Ma jiraan qaddarka loo baahan yahay ee waqtiga fasalka ee laga filayo ardayda. Waqtiga ardayda ku qaatay shaqada fasalka ayaa ku kala duwan maalin kasta ardayga iyo meeleynta. Ardayda / Waalidiinta waxaa looga baahan yahay inay hubiyaan Google Doc maalin kasta wixii macluumaad ah ee ku saabsan maaddo kasta. Macalimiintu waxay u soo gudbin doonaan waxyaabaha laga filayo casharka maalin kasta. Macallimiintu waxay raaci doonaan jadwalka caadiga ah ee 6 maalmood iyo waqtiga loo cayimay. Kama filayno inay ardaydu maalinta oo dhan kumbiyuutar ku jiri doonaan. Waxaan fileynaa ardayda inay ku qaadan doonaan waqti isku mid ah e-Waxbaridda guriga sida ay ku qaataan dugsiga. Tusaale ahaan: Ardaygu wuxuu ku biiri karaa cashar koox yar ah oo xisaab ah oo toos ah inta lagu jiro waqtigooda xisaabta caadiga ah, wuxuu dhammaystiraa meeleyn ama tababar, ka dib wuxuu ka shaqeeyaa IXL, iyo wuxuu dhammaystirayaa shaqada loo xilsaaray.
Ardayda waxaa looga baahan yahay inay ka hubiyaan Google Doc iyaga oo adeegsanaya Schoology / Seesaw illaa 8:40 maalin kasta. Ujeedadu waa in la raaco jadwalka dugsiga sida ugu macquulsan.
Haa, inta macallinka u oggolaado.
Goorma ayaa la heli doonaa shaqada ardayga?
Macallimiintu waxay heli doonaan casharro la heli karo 8:00 subaxnimo maalin kasta. Waalidiintu waxay ka heli doonaan emayl maalinle ah maamulahooda oo leh tilmaamo ku saabsan sida loola xiriiro casharrada maalintaas.
Ardaydu way dhammayn doonaan shaqada uu u xilsaaray macallin kasta si ay u muujiyaan aqoontooda heerka fasal bartilmaameedyada waxbarashada lagama maarmaanka u ah waxyaabaha ay ardaydu baranayaan ka dib wareegga 6-maalmood. Culeyska shaqadu waa inuu la mid ahaadaa maalin maalmaha ka mid ah iskuulka.
Maxay ardaydu sameeyaan haddii ay ka diiwaangashan yihiin orkestara fasalka 4aad / 5aad ama muusikada fasalka 5aad, koorso ama koorso muusig cod ah?
Macallimiinta muusigga ayaa u caddeyn doona waxyaabaha laga filayo ardayda iyagoo adeegsanaya Google Doc fasalka muusikada ama maalmaha casharka. Tani waxay si isku mid ah ugu shaqeyn doontaa macallin kasta ama adeeg bixiye la shaqeeya ilmahaaga.
Sidee ardaydu uga heli doonaan meeleintooda khabiiro takhasus leh?
Khabiiro takhasus leh ayaa ku dhejin doona meeleynta heerka fasalka Google Doc kadib wareegga 6-maalin.
Tijaabooyinku waa inay la jaanqaadaan tilmaanta. Tani waxay noqon kartaa imtixaan laga qaado deegaanka internetka ama tani waxay noqon kartaa imtixaan fasalka lagu soo laabto ka dib. Macallimiintu waxay kula xiriiri doonaan ardayda Google Doc, Schoology, Seesaw. Fadlan u oggolow ardayda inay dhammaystiraan qiimeynta kaligood. Qiimeynta qaarkood waxaa loo isticmaalaa, qayb ahaan, in lagu caawiyo macallimiinta inay ogaadaan waxa si fiican ugu dhacay waxbarashadda iyo waxa weli u baahan kara waxbarid badan.
Qiimaynta guud ee caadiga ahi weli ma dhici doontaa?
Waaxda Waxbarashada ee Mareykanka ayaa ka qaaday dhammaan gobollada imtixaannadooda sannadkan.
Ogsoonow: Dhammaan ardayda ma wada qaataan dhammaan qiimeynta liistada.
DHAMMAAN Tijaabada NWEA: Waa la joojiyay.
Imtixaanka MCA: Waa la joojiyay
Qiimaynta Guud ee Fasalka: Macallimiintu waxay sii wadi doonaan inay isticmaalaan isku darka qiimeynta hadda iyo qiimeynta beddelka ah ee ardayda si ay u muujiyaan waxbarashadooda.
Qiimaynta Qorista Degmada (Qorniinka Qabow): Waxaa loo joojiyay dugsiga hoose; dugsiga dhexe ayaa dhameystiray qiimeyntan.
XAQIIQADA 4Se iyo 4S qurxinta: Waa la joojiyay
Istation: Sii wad isticmaalka qaybta guriga. Intaas waxaa sii dheer, fasalada K-3 Isbaanishka ee Fasalka, Fasalada 4aad iyo 5aad sidoo kale waxay bilaabi doonaan hirgalinta wax soo saarkan waxbarasho / qiimaynta oo ah tijaabo sannad dugsiyeedkan.
Tijaabinta HSK / YCT: Waa la joojiyay
Tijaabooyin hufan: Waa la joojiyay
Macallimiintu waxay sii wadi doonaan buugaagta fasalka si ay u qiimeeyaan barashada ardayga ee lagu dhammeeyo e-Learning. Macallimiintu waxay beddeli karaan meeleynta ama imtixaannada ay ugu wacan tahay deegaanka e-waxbarashada.
Sidee waalidiinta / ardayda ula xiriiri karaan macalimiinta?
Waalidiintu waxay kula xiriiri karaan macallimiinta emayl. Ardaydu waxay la xiriiri karaan macallimiinta iyagoo adeegsanaya Seesaw (PreK-3) Farriinta cilmiga (4-5) ama emayl.
Macallimiinta iyo shaqaalaha taageerada (lataliyayaasha, maamulayaasha, shaqaalaha bulshada, maareeyayaasha kiisaska waxbarashada gaarka ah) ayaa la heli doonaa Isniinta - Jimcaha marka la eego jadwalka degmada laga bilaabo 7: 45-3: 45.
Goorma ayay ardaydu ka filan karaan jawaab macallimiinta iimaylka ama Schoology ama Seesaw?
Ardaydu waxay filan karaan inay ka maqlaan macallimiinta inta u dhexeysa saacadaha 7: 45-3: 45. Ardaydu waxay la xiriiri karaan macallimiinta saacadahaas ka baxsan, laakiin waa inay filayaan jawaabo inta u dhexeysa xilliyadaas.
Google Doc ayaa bixin doonta macluumaadka loo baahan yahay.
Waalidiinta waa inay sii wadaan isku xirka marinka Skyward Parent Access hadii cunugaada jiranyahay uuna awoodin inuu kaqaybqaato barashada elektaroonigga ah.
Macalimiintu waxay lashaqeyn doonaan ardayda si ay ugala hadlaan fursadaha isku xirnaanshaha.
La-taliyayaasha iyo shaqaalaha bulshada waxaa laga heli karaa 7: 45-3: 45. Waalidiinta / Ardayda waa inay marka hore iyaga kula soo xiriiraan iyagoo emayl u diraya. Kulamada dabagalka ah ayaa si wada jir ah loo go'aamin doonaa oo ay ku jiri karaan kulanka Google Meet oo ah hab wajiga iyo wejiga isdhexgalka.
Macallimiinta waxbarashada gaarka ah ayaa diyaar u ah inay la shaqeeyaan ardayda, ka qayb galaan shirarka IEP iyo kulammada qiimeynta ee la socda jadwalkooda caadiga ah inta u dhexeysa saacadaha 7: 45-3: 45. Macalimiintu waxay la xiriiri doonaan ardayda iyo qoysaska kiiskooda si ay ula xiriiraan. Qorshuhu waa in loo sii wado edbinta sidii caadiga ahayd.
Qorshaha Kajawaabidda CoronaVirus (COVID-19)
Macluumaadka e-Learning Deephaven -March 26, 2020